James Swan Oo Sheegay In Soomaaliya Ay Halis Waajaheyso | Hayaan News
James Swan Oo Sheegay In Soomaaliya Ay Halis Waajaheyso
“Dawladda Federraalka iyo Madaxda Maamul Goboeedyada inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu xallinayo is mari waaga syaasadeed….”
New York(Hayaannews):Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilan Soomaalia James Swan ayaa sheegay in xiisadda siyaasadda ee sii cakirmaysa ee Soomaaliya ay halis ku tahay horumarkii laga samaynay dib u dhiska hannaanka dawladdeed ee Soomaaliya iyo xataa xaaladda amniga.
Swan waxa uu walaac ka muujiyey iska hormaadka, xeeladaha cadaadiska iyo awood muujinta oo uu sheegay inay halis ku tahay xaaladda waddanka.Waxa uu sheegay in heshiiskii la gaaray 17-kii Sebtember u yahay kan ugu habboon ee lagaga bixi karo dib u dhaca dooarshada, iyo xaqijinta in hoggaamiyayaasha Soomaaliya ay idan cad u haystaan wajaibaadkooda isla markaana loogu soo noqon alhaa in mudnaanta la siiyo ajandayaasha qaranka.
Waxa uu sheegay in loollalnka afka uu sii saa’idayo, isla markaana dhacdadii 19-ki February ay carqaaladaysay shirkii lagu qaban laha Muqdisho ee lagu dhameystiri lahaa heshiiska September 17.
Waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay labada maamul ee Jubaland iyo Puntland ugu soo biiri ahaayeen wadahadallada.
Wakiilka dawladda Maraykaka ayaa sheegay inay ugu baaqayaan hoggaamiyayaasha Soomaalida inay ka faa’iidaystaan fursadaha, ayna taasi tahay tan ugu degdeg badan inay nabadda ku hormariyaan.
Waxa uu ugu baaqay dawladda federraalka iyo madaxda maamul goboeedyada inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu xallinayo is mari waaga siyaasadeed taasi oo sheegay inay halis ku tahay mustaqbalka Soomaaliya. Dawladda Maraykan sheegtay in Al-Shabaab ay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya, waxaana uu shaaciyey in sdadex ka mid ah hoggaamiyayaasha Al-Shabaab ay soo jeediyeen inay ku darayaan liiska cunqabataynta Qaramada Midoobay, saddexdaasi oo kala Abuukar Cali Aadan, Macalin Ayman iyo Mahad Karate.